प्रदीपको ‘दीपेन्द्र सरकार’ घोषणामा नै सीमित हुने हो त ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalप्रदीपको ‘दीपेन्द्र सरकार’ घोषणामा नै सीमित हुने हो त ?
Home मनोरञ्जन प्रदीपको ‘दीपेन्द्र सरकार’ घोषणामा नै सीमित हुने हो त ?
काठमाडौँ : पाँच तारे होटलमा निकै तामझामका साथ घोषणा गरिएको फिल्म हो ‘दीपेन्द्र सरकार’ । दरवार हत्याकाण्डमा मृत्यु भएका राजा दीपेन्द्र वीरविक्रम शाहको प्रेमकथामा आधारित हुने भनिएको फिल्ममा अहिलेका चर्चित अभिनेता प्रदीप खड्काको प्रमुख भूमिका रहने फाइनल भएको थियो ।
उनले फिल्ममा दीपेन्द्रको भूमिका निर्वाहा गर्दै थिए । ‘प्रेमगीत २’ रिलिजको एक महिना अगाडि निर्माता सन्तोष सेनले उक्त फिल्मको घोषणा गरेका थिए । फिल्मको घोषणामा प्रदीप दिपेन्द्रकै स्टाइलको पोशाकमा उपस्थित भएका थिए । तर, फिल्म घोषणाको एक वर्ष वितिसकेको छ ।
धेरैले उक्त फिल्म निर्माताले ‘प्रेमगीत २’ चलाउन अपनाएको फण्डा भनेका थिए । अहिले त्यो सत्य प्रमाणित हुँँदैछ । निर्माता सेनले फिल्म ५ करोड ५० लाखमा निर्माण गर्ने र ७५ सालको जेठ १९ गते प्रदर्शन गर्ने समेत घोषणा गर्न भ्याएका थिए । तर, उनले बोली पूरा गर्न सकेनन् । प्रदीपको ‘प्रेमगीत २’ सँगै ‘लिलिबिली’ र ‘रोज’ रिलिज भइसक्यो ।
निर्माता सेनको नयाँ फिल्म ‘मेरी मामु’ रिलिज भइसकेको छ । उनी चाँडै ‘प्रेमगीत ३’ को तयारी थाल्दैछन् । तर, ‘दीपेन्द्र सरकार’ घोषणामा नै सीमित भएको छ । अब यो फिल्म बन्छ वा बन्दैन ? अन्यौलमा छ । यस विषयमा अचेल न निर्माता सेन बोल्न चाहन्छन् न त प्रदीप नै । दुबै तैचुप मैचुप गरेर बसेका छन् ।
एउटा कुराले भने तपाईलाई आश्चर्यमा पार्न सक्छ । अभिनेता प्रदीपले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राममा आफूले गरेका र गर्न बाँकी फिल्मको नाम उल्लेख गरेका छन् । डेब्यु फिल्म ‘स्केप’ देखि हाल छायांकन भइरहेको फिल्म ‘लभ स्टेशन’ सँगै फिल्म ‘दीपेन्द्र सरकार’ को नाम पनि लेखेका छन् ।
उनले ‘लभ स्टेशन’ पछि निर्देशक हेमराज विसीको फिल्म र ‘प्रेमगीत ३’ गर्ने चर्चा छ । फिल्म ‘भैरवी’ पनि उनले साइन गरिसकेका छन् । तर, प्रदीपले ‘लभ स्टेशन’ पछि ‘दीपेन्द्र सरकार’ लाई मात्र पाइपलाइणमा राख्नुले फिल्म निर्माण हुने आश भने गर्न सकिन्छ । तर, कहिले ? यसको भने प्रतिक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।